Iindaba-eHong Kong International Printing and Packaging Exhibition
Ushicilelo lwaMazwe ngaMazwe laseHong Kong kunye neMiboniso yokuPakisha
I-7th Hong Kong International Printing and Packaging Exhibition yeyona ndawo iphambili nenqabileyo yokumisa ishishini kwindawo enye. Ibe yibhulorho ebalulekileyo kunye nehabhu edibanisa ababoneleli ngeenkonzo zokuprinta kunye nokupakisha nabavelisi behlabathi, ababoneleli beenkonzo kunye nabarhwebi. Apha, ababonisi baya kubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zoshicilelo kunye nokupakisha izisombululo, izinto zakutshanje kunye nezixhobo, kunye neenkonzo zokuhanjiswa kwezinto, njl.ukubonelela abathengi abavela kuzo zonke iindlela zobomi bafuna ukushicilela kunye neenkonzo zokupakisha ukubonelela ngezityebi zokhetho lwezisombululo, ukunceda amashishini ukuphucula umfanekiso kunye nomtsalane weemveliso, ngokwandisa ukhuphiswano lweemveliso.
Ubulungisa bufunyenwe kakuhle ngumzi mveliso, njengoko kunokubonwa kunyuka ngokuthe ngcembe kwinani lababonisi kunye nabathengi. Ukusukela ngo-2011, lo mboniso utsale ngaphezu kwama-320 emiboniso evela kumazwe ayi-8 nakwimimandla, kubandakanya iHong Kong, i-Mainland China, iJamani, iKorea, iPhilippines, iSingapore, iThailand neTaiwan, nto leyo ebonisa ukwanda kwama-22.8%. Ngoncedo lweli ziko lipudong kurhwebo olusebenzayo kunye neqonga lokwazisa, ababonisi bafikelela kubasebenzisi bokuphela, iiarhente zokushicilela, abapapashi, abavelisi, iinkampani zokuprinta kunye nokupakisha, abathengisi, abayili kunye neenkampani zemveliso kumashishini ahlukeneyo. Inani labathengi abazimase unyaka ophelileyo lingaphezulu kwe-11,000, ukonyuka kwe-6.4%, kwaye bavela kumazwe kunye nemimandla eyi-109.
Ukupakishwa kwe-Hongbang kuphinda kuphume, kujongwene nehlabathi, kujonge kuwo wonke umntu. Kukubonelela kuphela ngenkonzo yobungcali kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu. Iimveliso zethu zigubungela ukutya, imichiza yemihla ngemihla, amayeza, i-agrochemicals, i-elektroniki, izinto zokwakha kunye neminye imimandla. Ukuzinikela kulawulo lomgangatho olungqongqo kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuxoxa ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ukoneliseka kwakho. Nokuba iodolo yakho incinci okanye inkulu, ilula okanye inzima, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi. Inkonzo elungileyo kunye nomgangatho owonelisekileyo uhlala unawe.